Ny akanjo mitaingina bisikileta dia akanjo azo tanterahina, toy ny fiarovana, ny wick, ny fofonaina, mora sasana, ny fanamainana haingana, sns. Ny akanjo mitaingina bisikileta miaraka amin'ny lamba manokana, miaraka amin'ny tanjaka, haingam-bidy tsara, fanitarana tsara, ary ny fanoherana ny abrasion tsara dia azo raisina ho toy ny fiasa cycl ...
1. lamba vita amin'ny lamba malefaka amin'ny ankapobeny dia malefaka sy maivana, miaraka amin'ny fahatsapana doka, tsipika matevina ary silhouette voajanahary. Ny lamba malefaka dia misy ny lamba vita amin'ny landy sy ny landy vita amin'ny lamba malemy ary lamba rongony malemy. Ireo lamba vita amin'ny knitting malefaka no ampiasaina matetika ...
Betsaka ny olona mahalala fa ny palitao dia natao manokana ho an'ireo mpankafy fanatanjahan-tena any ivelany. Na izany aza, ny palitao dia akanjo ampiasaina manokana miaraka amin'ny fiasan'ny rano sy ny rivotra. Tsy mahay misafidy ny ankamaroan'ny olona. Samy hafa ny volavolan'izy ireo ho an'ny ...